Imidlalo YamaRoblox Ehamba phambili - Disemba 2020 (Uhlu) - Ukudlala
URoblox uyipulatifomu enkulu yomhlaba wonke lapho izigidi zabadlali zihlangana khona nsuku zonke ukukhombisa amakhono abo wokudlala ezweni eligxile ezintweni ezi-3. Umdlali angadlala imidlalo ethinta ingqondo ethuthukiswe yinoma yimuphi umsebenzisi emhlabeni jikelele futhi angakha owakhe umdlalo futhi awahlanganyele nabanye abazowudlala. Zombili izinhlobo zegeyimu kuRoblox kanye nomcabango wabathuthukisi akunamkhawulo.
URoblox wethulwe ngo-2007 futhi njengamanje uhlala abadlali abayizigidi ezingama-64 ngenyanga futhi ugcina ama-akhawunti ayizigidi eziyi-178 kule nkundla. Abasebenzisi bangayilanda njengohlelo lokusebenza ku-Android naku-IOS futhi badlale umdlalo kumathebulethi abo, kwi-PC, ku-Xbox One, noma kumadivayisi we-Amazon.
Phakathi kwamakhulu imidlalo eRoblox ngaphesheya kweqembu, imidlalo esabekayo yeRoblox ikhombisile ukuthi iluhlobo oluthandwa kakhulu, olungadudula i-adrenaline yakho iye ezingeni elilandelayo. Ngakho-ke, uma ufuna umdlalo omuhle kakhulu weRoblox wesikhathi sonke, usendaweni efanele. Nalu uhlu lwamageyimu aphezulu ayishumi asabekayo nezinye izici zawo.
Ngibheke ku Thola iRobux yamahhala ngo-2020? landela yethu Imihlahlandlela yeRoblox .
Uhlu Lwamageyimu Athusayo Ahamba phambili weRoblox:
1. Ukuthula Kuthule
Kuyinto umdlalo wokugcina othokozisayo wabadlali abajabulela isenzo, ukugeleza nodlame. Umdlalo uletha izinhlobonhlobo zezinselelo nezimo, futhi ubhekana nezingqinamba ezingalindelekile. Kususelwa endabeni yefilimu ye-horror engaphezu kwendalo yaseMelika ka-2007 ehamba ngegama elithi Dead Silence.
Kunezinhlobo eziningi zemidlalo ngaphakathi kwalesi sihloko. Ungadlala nabangani futhi ujabulele umdlalo kahle. Uma ufuna izindaba ezethusayo, lena indawo efanelekile kuwe. Kukhona futhi nemodi yokusinda ekunikeza izinsiza ze-barebones. Abadlali kufanele bahlale bephila isikhathi eside kakhulu.
Inemodi ye-First-Person Perspective (FPP) lapho abadlali bangadlala khona nabanye abadlali abangafika kwabangu-4.
Kunokuthuka okungama-15 okugxumagxuma (okungu-4 okukhulu, okungu-11 okuncane) emdlalweni ngesilinganiso sokwesaba se-4.0.
Kuyinto umdlalo omangalisayo owesabekayo weRoblox. Wena nomngane wakho kudingeka niphunyuke ebhilidini. Kuyipoki ngokwenza indlela yakho iye phezulu esakhiweni. Ungakwazi ukunqoba zonke izithiyo eziza endleleni. Ihluzo ziyadingeka impela kumdlalo, kepha ziyajabulisa nomngani oyedwa. Abasebenzisi bangaba nesikhathi se-spooky lapho bezama ukufinyelela igumbi 705.
Kufanele uhambe uzungeze imephu bese uzama ukufika esitezi sesikhombisa nomlingani wakho. Akufanele ubhekane nanoma yiziphi izinkinga. Igeyimu ihamba kancane futhi izothatha isikhathi sakho.Ungaba nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu ngengxoxo yezwi ye-Discord ngenkathi udlala.
Ukuhlanganiswa kwesenzo, ukuzijabulisa, umphenyi womuntu wokuqala, nokwethuka kwengqondo kuhlanganiswe kanye nendaba emnyama nesindayo.
Ihluke kakhulu ezindaweni zayo. Lo mdlalo ushintsha izigcawu nezilungiselelo ngokushesha kunalokho umdlali angakucabanga.
3. I-Horror Elevator
It is a umdlalo horror lakhiwa zMadZeus. Ikheshi lima phansi okungahleliwe, isitezi ngasinye sinikeza isimo esihlukile esethusayo. Ababulali abasha bangezwa ngezikhathi ezithile kumdlalo wamanje, okuwugcina uhlanganyela. Umdali weHorror Elevator uneminye imidlalo eminingi eseceleni futhi.
Lezi zilungele imidlalo efuna ukuhlola izici ezahlukahlukene zemidlalo ye-Horror. Sincoma ukuthi uzame lesi sihloko esihle. Umdlalo umnandi kakhulu nabantu abangahleliwe ku-inthanethi.
Kunezitezi ezingama-24, futhi izinga lobunzima liyakhuphuka njengoba umdlali eqhubekela esisekelweni esilandelayo esingahleliwe.
Iseva ikwazi ukwamukela abadlali abangafika kwabangu-10 ngasikhathi sinye.
Kungumdlalo owodwa owesabekayo ongokwengqondo owenziwe ngu-Egroce. Idizayinelwe ukulingisa inkohliso-ebusweni-esibukweni-inkohliso. Kungumdlalo omuhle kakhulu othatha ama-trope ajwayelekile we-Obby futhi uwaphenye ngokuhlukile njalo. Isibuko singena emidlalweni engaba namandla kakhulu eRoblox.
Ubumnandi buqala lapho ufiphaza amalambu egumbini. Uzoqala ukuzwa imisindo futhi ubone ukubonwa okuphazamisayo. Umncintiswano unikeza izexwayiso ezinganeni ngaphambi kokuba zingene kulo mdlalo.
Iveza kahle isimo sokucabanga. Umdlali udinga ukuzulazula ngenkambo yezithiyo ekhohlisayo, ngokusekelwe ngokuphelele ekucatshangweni okuholela njalo ezingeni elisha lezinselelo okufanele zinqotshwe.
Umbhalo wokugcina womdlalo uqukethe imigqa yekhodi engu-1000 +, okuyisandiso sesikripthi esiyisisekelo. Inquma ukuthi umdlali angazifihla noma abonise kanjani izingxenye ezifihliwe ohlangothini lwesibuko futhi aphathe izakhiwo zezinto.
5. Uwedwa Endlini Emnyama
Kungumdlalo owesabekayo, owesabekayo lapho umphenyi wangasese ahambela edolobheni elincane ukuyophenya ngokubulawa kwezimoto ngesihluku bese ethola imfihlo emnyama ngomndeni. Ukuphela kwendlu emnyama kuyisivumelwano sangempela uma kukhulunywa ngemidlalo esabisayo yeRoblox.
Kungumdlalo wakamuva, futhi ungabona ukubonwa okuthusayo. Kuyinto ethandwa kakhulu emphakathini. Ungajabulela izinzuzo eziningi ngemuva kokufunda indaba. Kuyathakazelisa.
Lo mdlalo uyindida ngoba uvumela abadlali abangafika kwabangu-20 ukuthi badlale ngasikhathi sinye, futhi awuwedwa.
Umdlali angathola amabheji ahlukile ngokuya ngobunzima bemisebenzi yabo, ohlonishwa kakhulu yiGrandmaster.
6. Imayini Yobusuku
Kubonisa indawo yezimayini ehlaselwe amaZombi abekade bengabavukuzi kodwa ephenduka lezi zidalwa, futhi afuna ukudla ubuchopho bakho. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubamisa ekusakazeni futhi uthole indlela yokuphunyuka kule ndawo ngengqondo yakho iqinile.
Umdlalo wezimayini zeNightmare uhlukile kweminye imidlalo esabisayo yeRoblox kulolu hlu. Kuyazuzisa kulabo abafuna isenzo esithe xaxa emdlalweni owesabekayo. Ungazama idolobha lezimayini iRobloxia namuhla. Abadlali abayi-9 abangawujabulela umdlalo ndawonye.
Umdlalo wabadlali abaningi lapho umdlali avaleleke khona nabanye abadlali abayisishiyagalombili emayini.
Inciphisa igebe phakathi kukaRoblox neMinecraft ngokusetha isenzo esivusa amadlingozi emdlalweni wezimayini omkhulu nowesabekayo. Zombili zinikeza indawo evundile yomcabango wabadlali abandiza phezulu kwimidwebo eyisisekelo esikhundleni sokushaya imidlalo ye-AAA.
Kuyinto zombie impi Roblox umdlalo lakhiwa Beacon Studio, umkhankaso ngoDisemba 2013. Umdlali kudingeka aphile kuze kube sekugcineni ngokusebenzisa izikhali zakhe ngaphandle kokuthinteka Zombies. Umdlali angathola i-EXP eningi ngokudubula ama-Zombies emakhanda njengoba kuveza umonakalo omkhulu.
Zombie Rush kuyinto esiyingqayizivele, Roblox umdlalo scary. Uthola izibhamu zokudubula iZombies, futhi kujabulise kakhulu nabangani. Zombies ziyohlasela wena. Abadlali bamageyimu bazolahlekelwa yimpilo yabo uma bengaqaphile kakhulu.
Kubandakanya uhlelo lokulinganisa futhi kubuye kuqophe inani lokubulala elizuziwe.
Inikeza ikhwalithi eyingqayizivele yokuvula ezinye izikhali ngokususelwa ekubalweni kokubulala kanye nokuthuthuka kwezinga.
8. Ngaphambi Kokusa
Umdlalo owesabekayo womkhathi unenhlanganisela ephelele yezinhlayiya, imisindo, negeyimu ehlanganisa ukudala isipiliyoni esiyingqayizivele seRoblox. Umdlalo owesabekayo weRoblox manje usunokulandelana. Ihluzo zingcono futhi ziyajabulisa ngokwengeziwe. Kuyajabulisa impela kulabo abakhetha i-gameplay yodwa.
Ungadlala futhi le ndaba esabekayo nabantu abangafika kwabayisishiyagalombili. Isipiliyoni somsindo ocwilisayo senza umdlalo wesabe kakhulu.Uhlobo olusha ukukhishwa kwakamuva. Ungalindela ama-spook amaningi ngaphambi kokuntwela kokusa.
Isebenzisa izinhlayiya zenkambiso ukudala indawo egwilizayo, njengokugoqa inkungu emboza phansi emephini, ukuqhuma kwesibhakabhaka emamephu eqhwa, ukuxuba izinhlayiya nokukhanyisa ukwenza kube nzima ngabadlali ukubona kude ebusuku.
Kungumdlalo wabadlali abaningi lapho abadlali badlala khona njengabasindile (basinda kuze kuse), iqhawe, noma i-slasher.
9. Thwala u-Alpha
Ungomunye wemidlalo yamaRoblox yabadlali abaningi esabekayo njengamanje esigabeni se-alpha lapho kubadlali abali-10, oyedwa phakathi kwabo ekhethwa ngokungahleliwe njengebhere, kanti abanye basindile. I-Bear kufanele ibulale wonke osindile kungakapheli imizuzu emihlanu. Umdlalo ubaluleke impela uma kukhulunywa ngokwakhiwa.
Kuyajabulisa uma ufaka izikhali kumugqa wesikhathi. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo zokuhlola iwebhusayithi. Umdlalo uthola izibuyekezo ezintsha njalo. Ungalindela ukubona amathani wamamephu amasha njalo ngenyanga.
Imvelo emnyama, kanye ne-accent ebomvu phakathi kwezingoma ezethusayo, yenza lo mdlalo ube nesipoki ngokweqiniso.
Uma kuqhathaniswa nabasindile, ibhere linezinzuzo eziningi zokuhamba.
Imfihlakalo Yokubulala 2
Kuyinto umdlalo owesabekayo owenziwe nguNikilis. Umdlali angaba ngu-Innocent, uSheriff, noma uMbulali.Abangenacala bayagijimela futhi bafihle umbulali futhi basebenzise amakhono abo okusesha ukudalula umbulali. USheriff usiza abamsulwa ngokuthatha phansi umbulali njengoba enesikhali.
Umbulali uqeda wonke umuntu futhi uzivikela emithonjeni yamaphoyisa. Umdlalo wemfihlakalo yokubulala unamamephu ahlukene. Ungaba kuzilungiselelo ezihlukile ngenkathi uxazulula imfihlakalo. Abasebenzisi babelwa indima ngokushesha uma ubumnandi buqala.
Iseva ingabamba abadlali abangafika kwabayi-12 ngombulali oyedwa, isheriff eyodwa, nabayishumi abangenacala.
Ifaka izindlela ezintathu: Okuvamile, iHardcore, ne-Assassin. Lezi zindlela zingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi ngumdlali.
Ububanzi Besikhathi Esizayo Semidlalo Eyesabekayo yeRoblox:
Ngokuthandwa okwandayo kwemidlalo yayo, iRoblox isebenza kanzima nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi iletha ulwazi oluhle kakhulu lokudlala emphakathini wayo. URoblox ushiya ilitshe engaguquki futhi uhlala eshaya ikhanda lesipikili uma kukhulunywa ngokuhlinzeka ngoshintsho lwekhwalithi ngezibuyekezo njengabadlali abathanda kakhulu. URoblox usebenzisana neMicrosoft Playfab, okuzoba yipulatifomu yayo ephelele yokubuyela emuva.
URoblox usebenzisa i-Star Creator Programme ekhuthaza ukugembula ku-inthanethi ngokunikeza ikhodi yabadali ku-Youtubers ukuthi babelane nezithameli zabo. Lapho umdlali ethenga iRoblox esebenzisa ikhodi yakhe, ingxenye yenzuzo yabiwa namaYoutubers asetshenziswa ikhodi yawo. Impela, uRoblox uzothatha umphakathi wezokudlala wamazwe omhlaba uye ezingeni elilandelayo ngokuzayo.
Imidlalo esabekayo kaRoblox iyindlela enhle yokulawula amabalazwe ngokuphelele. Ungathola ama-spooks amaningi futhi ujabulele isihloko nabangani bakho. Kukhona amathani wemidlalo esabekayo kulolu hlu. Sithemba ukuthi unesipiliyoni esihle ukuwajabulela kumadivayisi akho.
Imibono Yezifanekiso Ze-Roblox Shirt
bhalisela i-akhawunti yomfundi i-amazon
ungayikhansela kanjani i-netflix ku-ipad
ukuthi ungakuthola kanjani okuhle ku-smart tv yakho
phezulu 50 owesifazane omuhle kakhulu
ungawulungisa kanjani umdlalo ku-steam